Tontolo_iainana · Oktobra, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Tontolo_iainana · Oktobra, 2014
Tantara mikasika ny Tontolo_iainana tamin'ny Oktobra, 2014
Oseania 23 Oktobra 2014
Tamin'ny fampiasana lakana (canoes) tarihim-pivoy voasokitra, miara-dalana amin'ireo kayaks aostraliana am-polony, ry zareo no nahavita nanakana sambo folo tokony handalo ny seranan-tsambo fanondranana arintany tao Newcastle.
Tselatra Namono Wiwa 11 Tao Kolombia
Amerika Latina 15 Oktobra 2014
Namely tanàna kely indizeny iray ny tselatra tamin'ity herinandro ity, ka nahafatesana olona 11 ary 18 hafa naratra tao Sierra Nevada an'i Santa Marta, Kolombia.
Lahatsary Mampiseho Finamanana Lehibe Eo amin'ilay Lehilahy Breziliana sy Zana-borona Tsikiririoka
Amerika Latina 13 Oktobra 2014
Ao anatin'ny lahatsary maharitra roa minitra monja, nampahafantatra ny namany vaovao vao haingana izy, zana-borona tsikiririoka, nahazo ny fon'ny olona sy mpankafy manerana an'i Brezila i João Silvestrini tamin'ny lahatsariny.
Voromby Baikoan-Davitra Ao Amazonia Manaramaso Ny Tontolo Iainana
Taorian'ny fiofanana notarihin'ny vondrona Tushevs Aerials tamin'ny volana Aogositra 2014, nahita ireo mpitarika ny vazimba teratany (indizeny) avy ao amin'ny faritra Loreto sy Madre de Dios ao Però fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanaharamaso ireo loza mety handrahona ny tontolon'ny ala ny fiaramanidina baikoan-davitra (drôna).
Maminaviana ny Hampandroso Ireo Nosy “Goat” I Jamaika Na Dia Eo Aza Ireo Hetsi-panoherana Miaro Ny Tontolo Iainana
Karaiba 09 Oktobra 2014
Nandefa fangatahana fanaovan-tsonia tany amin'ny UNESCO ireo mpitantana an'i Jamaika, kanefa nitarika famadihana palitao ny fampiasam-bola 1,5 lavitrisa $. Voafatotra amin'ny FMI, mety ho be loatra ny vola ka sarotra ny hamela azy.
Afrika Mainty 08 Oktobra 2014
Tiorkia 07 Oktobra 2014